UMzantsi Korea sele unabasebenzisi abangama-260 lamawaka be-5G | I-Androidsis
UMzantsi Korea sele unabasebenzisi abangama-260 lamawaka be-5G
Icandelo loMphathiswa Wezenzululwazi wase-Korea kunye ne-ICT babelane ngedatha ephambili yokwamkelwa kwetekhnoloji ye-5G kweli lizwe.
Ezi zibonise ukuba Abanye ababhalisile abangama-260,000 bajoyine inethiwekhi ye-5G inikezwe ngabaqhubi abathathu abasebenza elizweni.
Ukuhamba ngokukhawuleza kuka-South Korea ukwenza izixhobo ze-5G kunye nezixhobo ezikhoyo ukuba zithengiswe kuye kwahlangabezana nemiceli mngeni kubamkeli bokuqala, abakhalaze ngolawulo olungqubanayo kunye nemicimbi yeselfowuni yokuqala yesizwe. Galaxy S10 5G ukusuka kwi-Samsung. Nangona kunjalo, abathengisi baye bahamba ngokukhawuleza ukulungisa ezo nkxalabo zokuqala.
Ngaphakathi nangokwabo, babonelele ngenkqubela phambili yokutsala abathengi abatsha kubuchwephesha obukhawulezayo. Iarhente yaseburhulumenteni iveze ukuba inani elibalulekileyo lamabango aphakanyiswe ngabathengi ayalungiswa. Inkonzo ye-ICT ikwaqaphele ukuba, ngabantu abaninzi abasebenzisa isikhokelo, kulindeleke ukuba iingxaki ezahlukileyo zivezwe eziza kufuna isisombululo.
Kuyabonakala ukuba Ukuthunyelwa kokuqala kwe-5G akuqinisekisi impumelelonjengoko kufuneka kubekho izikhululo ezisisiseko esaneleyo kunye nezixhobo ukwanelisa inani elikhulu labemi. Le miceli mngeni yokujamelana nokujongana neenqwelomoya zaseMelika ezinabemi abangaphezulu kwezigidi ezingama-328 zokuba bakhonze. Abemi baseMzantsi Korea, abaqikelelwa kwizigidi ezingama-51.3, bangaphantsi kwesinye kwisithandathu kuneseMelika, kwaye umhlaba weli lizwe ungaphantsi ngama-99.
Ngaphandle kwemiqobo, Ukuphunyezwa kwenethiwekhi yase-Korea yase-Korea kuhamba ngokuthe ngcembe. Ukuza kuthi ga kule veki, abaqhubi baseMzantsi Korea banezikhululo ezingaphezulu kwe-54,200 5G kwilizwe liphela, inyuke nge-7% kwiveki ephelileyo. Bajolise ekwandiseni, ngokukhawuleza nangokulula, ukubandakanywa kwenkqubo yabo ngeemephu ezikwi-Intanethi.
Okwangoku, isizwe sigxile kuluntu lwasezidolophini nakwezinye iindawo ezinabantu abaninzi. Nangona kunjalo, iinkqubo kulindeleke ukuba zisasaze ngakumbi kule minyaka mibini izayo.
Kuphuhliso olunxulumene noko, umqhubi waseSwitzerland uSwitzerlandcom kutshanje ubhengeze izicwangciso ezithile zokuqalisa iinkonzo ezithile zonxibelelwano lwe5G, ezinokuthi zenze iSwitzerland ilizwe lokuqala laseYurophu ukuyiphumeza. Eli lizwe sisiqingatha sobukhulu boMzantsi Korea kwaye inesithandathu kubemi boMzantsi ukuba babugubungele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UMzantsi Korea sele unabasebenzisi abangama-260 lamawaka be-5G
Iingcebiso zokuthintela ifowuni yakho ye-Android kubushushu